RW Rooble oo ku adkeystay inuu tago Garbahaarey, Axmad Madoobe oo raali aan ka aheyn iyo qorshaha xukuumadda | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta RW Rooble oo ku adkeystay inuu tago Garbahaarey, Axmad Madoobe oo raali...
RW Rooble oo ku adkeystay inuu tago Garbahaarey, Axmad Madoobe oo raali aan ka aheyn iyo qorshaha xukuumadda
Ra’iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa socdaal aysan raali ka ahayn Jubaland wuxuu Sabtida, 10-ka July, 2021 uu ku tagayaa magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo.
Rooble oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaa xarunta ku meelgaarka Jubaland ee Kismaayo ayaa ka biyo-diidey soojeedino kaga yimid hogaanka ismaamulka oo ahaa in uu ka baaqsado socdaalkaas.
Sida ay sheegayaan illo wareedyo xog ogaal ah, wadahadaladii madaxda Jubaland ay Rooble kala yeesheen ka baaqsashada socdaalkan oo qabsoomay ugu yaraan laba jeer ayaa kusoo dhamaadey natiijo la’aan.
“Wasiirka koowaad wuxuu ku adkeystay in uu doonayo in uu tago meel walba,” ayuu yiri mid kamid ah xubnaha goobjooga ka ahaa shirkan kaasoo codsadey in aan la adeegsan magaciisa sababo ku aadan xogta oo xasaasiya.
Wuxuu ku daray: “Arrinta safarka waxaa lagu soo hadal-qaadey shirkii golaha wasiirada Khamiista (waa lagu heshiin waayey);
Rooble iyo Axmed Madoobe ayaa kulan kale ka yeeshay way isku fahmi waayeen. Mar kale caawa ayay isku afgaran waayeen”.
Maamulkan uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam ayaan wali si rasmi ah uga hadlin socdaalka Rooble kaasoo dharbaaxo ku noqonaya qaabka hogaamiyeyaasha Soomaalida uga heshiiyeen in loo wajahayo qadiyadda gobolka Gedo.
Madaxda Soomaalida ayaa horey isugu afgartey in guddi heer wasiiro dowlad goboleed ay ay dib-u-heshiisiin ka sameeyaan Garbahaarey isla markaana dadka degaanka soo xushaan cidda noqoneysa guddoomiyaha degmadda.
Sikastaba ha ahaatee, jihada cusub ee uu qaadayo Rooble ayaa la rumeysan yahay in ay dib-u-dhac horleh ku keeneyso doorashooyinka la filayey in ay wadanka ka qabsoomaan dhowaan, waxaana ay soo kordhineysaa hubantii la’aantii ka taagneyd in coddeyn nabadeed.
Previous articleTababare Horyaalka Ingiriiska Jooga Oo Xariir Shaqsi Ah La Sameeyay Griezmann Si Uu PL Ugu Qanciyo – banaadirsom
Next articleDEG DEG: Qarax xoogan oo ka dhacay Muqdisho iyo taliye ka bad-baaday